Am-polony maro izy ireo no voakasik’izany. Tsy nanaiky mora foana anefa ireto farany noho ny tsy fisian’ny vahaolana maharitra nomena azy ka nanatona mivantana ny lehiben’ny tsena. Toraka izany koa ny prefektioran’Antananarivo sy ny kaominina Antananarivo renivohitra. Tapaka nandritra ny fihaonan’ny roa tonta fa afaka mivarotra indray aloha izy ireo saingy tsy maintsy maka sisiny kosa manaja ny lalan’ny mpandeha an-tongotra. Tsy maintsy manaja ny fahadiovana ihany koa hisian’ny fifampitsinjovana. Nambaran’ireo mpivarotra taorian’izany fa vonona izy ireo ny hanaja ireo fepetra ireo. Vonona koa izy ireo ny hifindra toerana rehefa misy ny vahaolana maharitra saingy mandrapaha aloha dia mangataka ny hahafahany mivarotra isan’andro izy ireo hamelomany ny ankohonany.